Visga ileta Oktoberfest na Munich | Akụkọ Njem
Gaa Leta Oktoberfest na Munich
Susana Garcia | | Obodo, Munich
Ọgwụgwụ nke ọnwa Septemba na mmalite nke Ọktọba na-abịarute, ọ bụghị naanị na ngwụcha ọkọchị na ọdịda na-amalite, mana ụdị mmemme ndị ọzọ na-atọ ụtọ na-amalite, dị ka Oktoberfest na Munich. A na-eme ememme biya biya a kemgbe 1810, n'agbanyeghị na ọ bụ n'ihi ụfọdụ ihe, enwere afọ ndị ọ na-emeghị, mana nke a akwụsịghị ọdịnala a dị ukwuu nke ejiji na ụdị ezigbo biya bụ isi ihe.
Ọ bụrụ na anyị ga-eleta Munich, ọ bụ nnukwu echiche ị ga - enwe ike ịme ya na ụbọchị ndị a, yana nnọkọ ga - ewe izu abụọ. Enwere ọtụtụ ihe omume, nnukwu ụlọikwuu jupụtara na ndị mmadụ na-anụ ụtọ nri na biya. Mana ọ bụkwa mbuli elu nke ọdịbendị nke Bavaria na akụkọ ntolite ya, yabụ anyị ga-enwe ọtụtụ ihe iji mee nke ama ama Oktoberfest.
1 Ndụmọdụ bara uru
2 Ulo na otu esi aga ebe ahu
3 Ihe Oktoberfest
A na-eme Oktoberfest afọ a n'etiti Septemba 19 na Ọktọba 4, na ọ bụ ememme biya kachasị ukwuu n'ụwa. Edepụtaghachila ya n'ọtụtụ mba, mana nke a bụ ezigbo ihe. Omenala ahụ malitere na ụbọchị mbụ site na ngagharị nke onye isi obodo Munich na-eduzi, na-anọchite anya mbata nke ndị na-eme biya ma ọ bụ Wirte na mpaghara ụlọikwuu ahụ. Nke a bụ otú Oktoberfest si amalite, mana ebe dị elu dị n'etiti abalị, mgbe onye isi obodo kpughere gbọmgbọm mbụ nke biya ịmalite ịmalite ijere ya ozi na-eti mkpu 'O' zapft bụ! ' Ọ bụ mgbe lita na lita biya bidoro nye ndị nọ n'ụlọikwuu ahụ.
Otu n'ime ndụmọdụ bụ tinye tebụl n'ime ụlọikwuu ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ biya, yana anyị ga-achọ ụlọ biya biya kachasị amasị anyị ebe enwere ọtụtụ. Ihe ọzọ anyị na-agaghị echezọ bụ iyi ụdị akwa dị iche iche, wee nwee ike ị rie oriri na nkwari zuru oke. Ọ bụrụgodị na anyị edebeghị akwụkwọ, ọ ka nwere ike ị enjoyụ biya n'ụlọ ntu. Tụtụ bụ oge kachasị mma, ebe ọ bụ na ndị mmadụ anaghị enubata. Ọ bụrụ na o juru, anyị ga-akwụ kwụ n'ahịrị chere oge nke anyị. Na mgbakwunye, ha na-adụ ọdụ iburu ego zuru oke, ebe ụfọdụ ụlọikwuu anaghị anabata kaadị.
Ọ bụrụ na anyị esoro ụmụ anyị na-aga, Tuesday bụ ụbọchị ezinụlọ, ha na-enwekwa ego na ihe nkiri. Na ụfọdụ ụlọikwuu, dị ka Ndị Augustine ha na-eme ubochi umuaka, ka ha na ndi nne na nna soro ha rie ma drinkuo ego n’enweghi ego. Ya mere, onye ọ bụla ga-anụ ụtọ oriri ahụ otu.
Ulo na otu esi aga ebe ahu
Enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ atụ na ọnụahịa dị mma n'obodo Munich, mana ekwesịrị iburu n'uche na na ụbọchị ndị a na-arụsi ọrụ ike, anyị ga-ebu ụzọ gaa akwụkwọ ma dị njikere ịkwụ ụgwọ ntakịrị karịa n'ihi nnukwu ọchịchọ. N'aka nke ọzọ, otu n'ime ụlọ ndị dị ọnụ ala bụ ụlọ mbikọ, na enwere ole na ole. Ha dị mma ma dị mma maka otu.
N'aka nke ọzọ, iji ruo ebe a na-eme Oktoberfest, anyị nwere ọtụtụ ohere. Si na tagzi na-abata na obodo mepere emepe ụgbọ ala ma ọ bụ ụzọ ụgbọ oloko na akara U5. Ememme ahụ bụ n'ọhịa dị n'etiti obodo ahụ, a na-akpọ ya Theresienwiese, bụ ebe agbamakwụkwọ dị n'etiti Luis nke mbụ nke Bavaria na Teresa nke Sajonia-Altenburgo na 1810. E degharịrị ememme ahụ ka ọ bụrụ ememme Ọktoba, ya mere, ọdịnala a malitere nke ọma na mpaghara a.
E wezụga oghere mmeghe, enwere ihe omume ndị ọzọ na-atọ ụtọ na oriri a. N'ihi na ọ bụghị ihe niile na-a drinkingụ biya ma na-eri soseji, mana enwerekwa ọtụtụ ntụrụndụ na ntụrụndụ. Na mbụ Sunday na Nme na-ahụkarị uwe, ebe a na-enwe ekele maka uwe na ejiji dị iche iche nke mpaghara Germany. Ọ bụ nnukwu ihe nkiri maka ndị njem nleta, yana ụgbọala jupụtara na ihe ịchọ mma na onye ọ bụla yi uwe ọdịnala.
na Tuesday bụ ụbọchị ụmụaka, na Mọnde mbụ bụ Oktoberfest njem maka ezinụlọ. Nke a bụ ụzọ onye ọ bụla ga-esi rie oriri a. Tụkwasị na nke a, ọ bụghị nanị na a na-etinye ụlọikwuu n'ime ime obodo, kamakwa, a na-enwekwa ọtụtụ ebe nkiri, nke nwere wiil ma ọ bụ na-agagharị agagharị, iji nwee obi ụtọ n'ụbọchị.
El Ugboro abụọ bụ ahụkarị Bavaria ejiji ndị inyom, na Lederhosen obu nke mmadu. Ọ bụghị onye ọ bụla na-eyi uwe ndị a, mana ọtụtụ mmadụ na-eyi ya, ọ nwere ike bụrụ ihe ọchị. Angermaier bụ otu n'ime ụlọ ahịa a kacha mara amara na Munich ma a bịa n'inweta ụdị uwe ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ha nwere uwe kamakwa akpụkpọ ụkwụ na ngwa, ha nwere ọtụtụ ụdị na ihe karịrị afọ 60 nke ahụmịhe. Mana enwere ọtụtụ ụlọ ahịa, dị ka Loden-Frey, ọ bụrụ na anyị dị njikere ịkwụ obere ntakịrị, ma ọ bụ Kleidermarkt, nnukwu ụlọ ahịa na-azụ ahịa nke abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Gaa Leta Oktoberfest na Munich
Ihe a ga-eme na Jamaica